Warbixinta Daraasada ee HACCP China & ISO9001 Study Study Program-Enterprise News-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Warbixinta Daraasada ee HACCP Shiinaha & Barnaamijka Daraasada ISO9001
Waqtiga: 2017-12-26 Hits: 120
Warbixinta Daraasada ee HACCP Shiinaha & Muddada Barnaamijka Barashada ee ISO9001 23.12.2017 ilaa 24.12.2017
Diseembar 26 2017
TUSMADA HORDHACA HACCP & ISO 9001 ARDAY
1. HACCP: Falanqaynta Khatarta iyo Qodobbada Xakamaynta Khatarta ah
Nidaam ka hortag oo nidaamsan oo loogu talagalay badbaadada cuntada ee ka timaadda cilmiga nafleyda, kiimikada, iyo khataraha jireed ee geeddi-socodka wax-soo-saarka taas oo sababi karta in badeecada la dhammaystiray ay noqoto mid aan ammaan ahayn, iyo naqshadaynta cabbiraadaha si loo yareeyo khatarahaas illaa heer ammaan ah.
2. Qoyska ISO 9000 ee nidaamyada nidaamyada maaraynta tayada ayaa loogu talagalay inay ka caawiso ururada inay hubiyaan inay la kulmaan baahiyaha macaamiisha iyo daneeyayaasha kale iyadoo lala kulmayo shuruudaha sharciga iyo sharciyeynta ee la xiriira sheyga.
1. Xiriirinta barnaamijka kale
2. Tilmaamaha lagu adeegsanayo nidaamka HACCP
3. Tababarka iyo waxbarashada: Shaqaaluhu waa inay fahmaan waxa uu yahay HACCP, oo ay bartaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay si sax ah ugu shaqeeyaan, iyo sidoo kale waa in la siiyaa qalabka iyo qalabka lagama maarmaanka u ah xakamaynta CCP-yada.
4. Codsiga: Codsiga mabaadi'da HACCP wuxuu ka kooban yahay 12-ka marxaladood ee soo socda, sida lagu caddeeyay isku xigxiga macquulnimada ee loo adeegsanayo HACCP.
5. Sharax alaabta iyo habka loo maro
B. ISO 9001 Qoyska 4 Heer gudahood
1. ISO9000: Nidaamka Maareynta Tayada 2015-Aasaaska iyo ereyada.
2. ISO9001: Nidaamka Maareynta Tayada 2015-Shuruudaha.
3. ISO9004: Maareynta Guusha ee Urur 2009.
4. ISO19011: Hagaha Hantidhowrka Nidaamka Maareynta ee 2011.
Daraasadda HACCP waxaa loo dejiyey iyadoo loo eegayo toddobo mabda '. Mabaadi'daas waxaa loo isticmaalaa in lagu hago kormeerka ama xisaabinta. Ka gaabinta u hogaansanaanta mabaadi'daas waxay burineysaa daraasadda HACCP iyo tixraac ayaa la diyaarin doonaa inta lagu jiro xisaabinta.
Koorsadan waxaan ku baran doonaa:
1. Aasaaska xisaabaadka
2. Qeexitaano tayo leh oo ku saleysan ISO 9001
3. Sida loo qorsheeyo xisaab hubinta
4. Farsamooyinka su'aalaha lagu weydiiyo
5. Qabashada xisaabinta furitaanka iyo xiritaanka kulamada
6. Sida loo kala saaro natiijooyinka hantidhawrka
7. Sida loo sameeyo xisaab hubin
Maareynta QC ee Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd. waxay qaadataa tababarka usbuuca Kirismaska ​​ee loogu talagalay HACCP & ISO 9001 Barnaamijka. Tababbarka 2 maalmood ee Mudane Wang, Waxaan si fiican u fahmaynaa Nidaamka Maareynta Tayada. Waxaan ku hawlan nahay hagaajinta Badbaadada Cuntada iyo Isgaarsiinta Halista. Dhammaan shaqaalaha Chitsuru waa inay si joogta ah uga qayb galaan koorsada waxbarasho ee nidaamka maaraynta tayada.
Badbaadada cuntada waa masuuliyada saarayaasha. Marar badan, waa inaan fulinno mas'uuliyaddan ka dhanka ah halka ay ku dambeeyaan danaha daneeyayaasha badan, kheyraadka aan ku filneyn, iyo mudnaanta lagu tartamayo. Waxaan rajeynaynaa in warbixintani ay soosaarayaasha siiso waxqabad awood u siinaya hay'adda inay si hufan oo wax ku ool ah u fuliso howlaheeda badbaadada cuntada ee adduunka sida xowliga ah isu beddeleysa.
Hore: Sannad Cusub, Mustaqbal Cusub 2018
Xiga: Caqabada Nafsaddeenna, Badbaadada Cuntada ee Sareysa Macaamiishayada